Fanafihana , Kidnapping, fandrobana volabe Jiolahy iray voapaingotra teny Tsimbazaza
Dahalo raindahiny efa kalaza tamina fandrobana lelavola mitentina 30.000.000 ariary sy fanaovana takalon’aina tany Maevatanana ary mpanakan-dalana nampitondra faisana ireo mpampiasa ny lalam-pirenena faha-7 mihazo ny faritra atsimon’i Madagasikara no tra-tehaky ny polisy.
Ny volana oktobra 2018 lasa teo dia nitrangana fanafihana mitam-piadiana tany Maevatanana. Mpivady mpandraharaha tany an-toerana no nisy nandroba ny tranony ka very tamin’izany ny vola telopolo tapitrisa ariary. Tsy niandry ela ny polisy tany an-toerana fa nanao ny fikarohana ka ny marainan’io dia tratra ny iray tamin’ireo jiolahy nanafika ireo mpandraharaha. Nitohy ny fanadihadiana ary andro vitsivitsy taorian’io dia tra-tehaka ihany koa ny efatra tamin’izy ireo izay nahatrarana basy miisa 4. Tsy nijanona hatreo ny fanenjehana ireo jiolahy fa nitohy ny famotorana ary fantatra fa mbola misy iray ny jiolahy tompon’ny ati-doha nanao io asa ratsy io saingy efa nitsoaka tao an-tanàna.
Voapaingotra teo Tsimbazaza
Nokarohin’ny Polisy ity farany ka tra-tehaka teny Tsimbazaza ny 12 jolay lasa teo. Tsy nanam-po ary tsy nahetsika izy satria voahodidin’ny polisy nanao fanamiana sivily ka noraisim-potsiny. Fantatra ary fa ankoatra ny fanafihana mitam-piadiana ataon’ireto jiolahy dia mpanakan-dalana amin’iny lalam-pirenena faha-7 iny izy ireo ary voarohirohy amin’ny trangana fakana an-keriny niseho tany Maevatanana. Miandrandra ny famoahan’ny Fitsarana ny tohin’ny raharaha goavana toy izao hatrany ny mpanara-baovao mba hanjakan’ny fangaraharana sy hiarovana ny fanjakana tan-dalàna tahaka ny famoahan’ny mpitandro filaminana vaovao ara-potoana toy izao.